မဂ္ဂနီစီယမ် Foundry Casting Die China Manufacturers & Suppliers & Factory
မဂ္ဂနီစီယမ် Foundry Casting Die - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
( 24 များအတွက်စုစုပေါင်း မဂ္ဂနီစီယမ် Foundry Casting Die ထုတ်ကုန်များ)
Notebook LCD ကိုထိပ်တန်းသို့ပြန်သွားရန်, Semisolid မဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်းအဆိုပါအလွိုင်း၏အခြားဒြပ်စင်များဖြည့်စွက်၏အခြေခံအဖြစ်မဂ္ဂနီဆီယမ်နှင့်အတူလက်တွေ့ကျသောသတ္တုအတွက်အပေါ့ပါးဆုံးသတ္တုဖြစ်ပြီး, ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာသည်နောက်ကျောမှတ်စုစာအုပ်အရည်ကြည်လင် ချ. သေ Casting semi-Solid သေ...
မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်းမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ထပ်, မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်းမောင်းသူမဲ့ဝေဟင်မော်တော်ယာဉ်ကြမ်းပြင်သည်đi-တီထွင်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်းပြားမြင့်မားတိကျစွာနှင့်မြင့်မားသောချေးခုခံနှင့်မြင့်မားသောချေးခုခံ၏အများဆုံးကိုယ်စားလှယ်အပြောင်းအလဲနဲ့အရွယ်အစား ချ. မြင့်မားသောတိ, မြင့်မားသောတိကျ AZ91D...
မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်း, ဖွဲ့စည်းတစ်ကြိမ်တည်းဖွဲ့စည်းအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပေါင်းစည်းမှုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်, အစိတ်အပိုင်းများကိုရဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်စည်းဝေးပွဲကိုကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချ,...
Semisolid မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်းအခြေစိုက်ပြား Casting Die
မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်းသတ္တု၏စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးအတွက်အပေါ့ပါးဆုံးသတ္တုတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ တူညီတဲ့အစွမ်းသတ္တိအစိတျအပိုငျးမြား၏အမှု၌, မဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်းအစိတ်အပိုင်းများပလပ်စတစ်ထက်ပိုမိုပါးလွှာပြီးပေါ့ပါးစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာထုတ်ကုန်စျေးကွက်အတွက်အလင်း quantified ပစ်မှတ်အောင်မြင်ရန်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။...
မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များ၏ကုန်ထုတ်လုပ်မှု Casting semi Solid သေ
မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်းစက်မှုဇုန်ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက်အပေါ့ပါးဆုံးသတ္တုတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ Semi-အစိုင်အခဲအပြောင်းအလဲနဲ့ပြီးနောက်, သတ္တုနံရံအထူ၏တိကျထက်ပို 0.3mm မှလုပ်ငန်းများ၌ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါမဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်းထိတ်လန့်ခုခံ၏အထူး functions များ, ဆန့်ကျင် wear နဲ့လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းကာကှယျဖို့,...
semi Solid မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်းကုန်ပစ္စည်းများ Casting Die
မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်းမြင့်မားသောတိများနှင့်ကောင်းသောသေ-casting ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူလက်တွေ့ကျသောသတ္တုအတွက်အပေါ့ပါးဆုံးသတ္တုတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ အီလက်ထရောနစ်ကုန်ပစ္စည်း Shell က Casting Die, Semi အစိုင်အခဲမဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်းထုတ်ကုန် ချ. သေဆုံး, အီလက်ထရောနစ်ကုန်ပစ္စည်း Shell ဆိုသည်မှာလျှပ်စစ်သံလိုက်ဒိုင်းကာအိတ်ဆောင်,...
လေဟာနယ်မဂ္ဂနီစီယမ်ရှဲလ်များအတွက်နည်းပညာ Casting Die
လေဟာနယ် ချ. သေဖို့မဂ္ဂနီစီယမ် Shell ဆိုသည်မှာ Semisolid များအတွက်နည်းပညာ Casting Die Semi-အစိုင်အခဲသတ္တုရန်မြန်နှုန်းမြင့်နှင့်မဂ္ဂနီဆီယမ်နှင့်လူမီနီယံအလင်းအလွိုင်းပစ္စည်း High-ဖိအားဆေးထိုးတန်ဆာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါထုတ်ကုန်မြင့်မားတဲ့သိပ်သည်းဆမြင့်မားခွန်အားနှင့်မြင့်မားသောတိကျရှိပါတယျ။...
တိကျစစ်ဘက်ဆိုင်ရာစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအစိတ်အပိုင်းများအဘို့အ Casting Die
တိကျစစ်ဘက်ဆိုင်ရာစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအစိတ်အပိုင်းများအဘို့အ Casting Die, မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်းမြင့်မားသောတည်ငြိမ်မှုနှင့်အတူပေါ့ပါးဆုံးသတ္တုဖွဲ့စည်းပုံမှာပစ္စည်း, သေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်းအရွယ်အစားနှင့်မြင့်မားသောတိစက်၏မြင့်မားသောတိကျသည်။ ဒါဟာအလင်းအလေးချိန်အားထိတ်လန့်စုပ်ယူမှု,...
မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်းလက်ပ်တော့အစိတ်အပိုင်းများအဘို့အ Casting Die
မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်း Mg မှတ်စုစာအုပ်ကွန်ပျူတာ၏အခွံနီးပါးမဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်းအပေါငျးတို့သအားသာချက်များအပေါ်အခြေခံသည်အဖြစ်လက်ပ်တော့အစိတ်အပိုင်းများ, မဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်းများအသုံးပြုမှုများအတွက် Casting Die ။ အဆိုပါစျေးမှာခုခံကွန်ပျူတာအစိတ်အပိုင်းများ၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောစစ်ဆင်ရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်;...
မဂ္ဂနီစီယမ် Foundry Casting Die
မဂ္ဂနီစီယမ် Casting Die
မဂ္ဂနီစီယမ် Automotive Casting Die
မဂ္ဂနီစီယမ်မှို Casting Die
မဂ္ဂနီစီယမ်အပိုင်း Casting Die
မှိုဒီဇိုင်း Casting Die
သည်းခံစိတ် Casting Die
OEM မဂ္ဂနီစီယမ်ကာစ် Die